Oge Ochie Forex | FXCC
Home / trading / Ngwaọrụ Forex / Azụmahịa Market Forex
Ngalaba Ogologo Oge Ogologo Ego
Ulo oru ugbo igwe uzo nke FX bu ihe di mfe, nke di mfe ile anya, ugbua okpukpo olu, nke n'egosiputa kwa ubochi ahia, nke ahia na emeghe ma nke ana emechi.
Ihe kpatara oge ahịa ngwaọrụ dị mkpa?
Jiri nlezianya mara ihe gbasara oge ahia
Chọpụta oge kachasị mma nke ụbọchị kwesịrị ekwesị maka atụmatụ ịzụ ahịa gị
Chọpụta oge nwere nnukwu ihe ịga nke ọma nke ahịa volatility
Zere nsogbu ndị na-emepụta ahịa nke nwere ike ibute ihe efu na-atụghị anya ya
Enweghi mgbawa mgbagwoju anya achọrọ iji chọpụta mgbe London mepee ma ọ bụ New York na-ekpuchi, anya doro anya na-enye ozi. Ndị ahịa nwere ike ịmata ugbu a oge kachasị mma nke ụbọchị kwesịrị ekwesị maka atụmatụ atụmatụ atụmatụ ha, ikekwe oge nwere nnukwu ihe ịga nke ọma n'ahịa ahịa. Ndị ahịa nwere ike izere ihe ijuanya ahịa, n'ihi na oghere ahịa na-esikarị ike ime mgbanwe dị iche iche nke nwere ike ibute ihe efu na-atụghị anya ya.
A na-enweta ngwá ọrụ a site n'aka ndị ahịa anyị Hub maka ndị na-ahụ maka akaụntụ FXCC.
Nbanye iji nweta anyị Ngwa ngwá ahịa efu
Iji tinye maka ngwá ọrụ n'efu gị, banye na ahịa Hub na-agụ ya
Okwu & Ọnọdụ ma mee arịrịọ gị.